Inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali - Popular Jewelry
Iyabuya (KU-ONLINE KUPHELA)
Inqubomgomo yethu ihlala izinsuku eziyi-15 ngemuva kosuku lokuthunyelwa. Uma kudlule izinsuku eziyi-15 selokhu sithumele iphakheji yakho, asikwazi ukunikela ngokubuyiselwa imali noma ukushintshaniswa.
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa imali, into yakho kufanele ingasetshenziswa futhi ibe sesimweni esifanayo naleyo oyithole kuyo. Okufakiwe koqobo kanye nanoma yiziphi izingcezu zokuncoma (uma zikhona) nakho kufanele kufakwe.
Once Imbuyiselo yakho ivunyelwe, imali yakho izocutshungulwa futhi kuzosetshenziswa ngokuzenzakalela indlela yakho yokukhokha yasekuqaleni. Sicela uvumele izinsuku ezimbalwa ukuthi imali ebuyisiwe isetshenzwe.
Sibuyisela izinto kuphela uma zinamaphutha noma zonakele. Uma udinga omunye esikhundleni, sithumele i-imeyili ku-info@popular.jew jewelry bese uthumela into yakho ku- 255B Canal Street New York, New York US 10013. Ukushintshana akuhambisani nemali engu-15% yokubuyiselwa imali.
Uzoba nesibopho sezindleko zokuthumela ezitholwe yimbuyiselo. Izindleko zokuthumela ngesikhathi sokuthenga azibuyiswa (uma imali yokuposa ixhaswe ngenketho yethu ejwayelekile yokuthumela mahhala lezi zindleko ngokuvamile ngeke zibonakale kuwe; iklayenti lizokwaziswa ngokuncishiswa ngaphambi kokubuyiselwa imali.)
Uma sikunikeza ilebula lokuthumela, izindleko zokuthumela okuthumelwayo zizodonswa embuyiselweni yakho.
Uma uthumela into ebiza ngaphezu kwe- $ 50 cabanga ukusebenzisa isevisi yokuthumela elandekayo nokuthenga umshuwalense wephakeji lakho. Asikwazi ukuqinisekisa ukuthi sizoyithola imbuyiselo yakho. Ungasicela ukuthi sinikeze ilebula nomshuwalense oshiwo (bheka ngenhla ukuze kukhishwe imali yokuposa embuyiselweni yakho.)